Akụkọ - Ndepụta nke ndị na-emepụta nke isi ihe nke atọ maka ihe mgbochi na njikwa ọrịa mara ọkwa
Fewbọchị ole na ole gara aga
Ozi ọma bụ maka manks
O doro anya na ogologo ọkọchị na-ezute igirigi dị ụtọ
Jiaojiang ji arụ ọrụ
"Ọrụ atọ" kachasị dị egwu
Max igweoduakwa Co., Ltd.
Onye isi njikwa Mao Xiaoyong
Ọ bịara n’oge. Enwere m ekele maka Kọmitii Mpaghara Jiaojiang na gọọmentị. Site na iru eru a, ọ dị mma maka akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ. Relieftụ ụtụ isi, ọmụrụ nwa ụlọ akụ na-amasịkarị, na ọbụna ịzụta ihe eji arụ ọrụ emeghewo oghere dị egwu.
N'okpuru oria oria ojoo
Nwee igwe ịkwa akwa nke nwere ike ịme uwe nchedo
Ọ dịka ịnwe nnekwu ọkụkọ ịdọbara akwa ọlaedo
Na ụlọ ọrụ ndị na-eme hens
Obi abụọ adịghị ya na achicha ahụ dị ụtọ
N'ehihie nke Machị 26, onye nta akụkọ ahụ gara igwe igwe akwa akwa, Ltd, nke dị na Hongjia n'okporo ámá maka oge mbụ. N'ebe a na-akụzi akụrụngwa, ndị ọrụ ka nọ na ngosiputa ikpeazụ nke igwe ịkwa akwa. Obere ụgbọala nke rụpụtara site na Haining na-eche ogologo oge. N'ihi egwu nke "enweghị ike ijide" ngwongwo, ndị na-emepụta na-ahọrọ "squat" kpọmkwem n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ iji hụ na a na-ebuba na igwe ịkwa akwa ọhụrụ a ngwa ngwa o kwere mee.
Mao Xiaoyong, onye isi njikwa Manx ịkwa akwa igwe Co., Ltd., "ha nyere usoro iri isii, mana anyị enweghị ike inyefe ha. Anyị ga-ezitere ha ụzọ iri na ise na mbụ, ọbụnakwa nye ha naanị ụdị ngosi ahụ. Ka anyị buru ụzọ gboo mkpa ha dị mkpa. ”
Kedu ihe na-aga? Ka anyị mata ụlọ ọrụ ahụ site na mmalite
Tọrọ ntọala na 2007, bụ ọkachamara na igwe akwa akwa na ụlọ ọrụ mmepụta ngwa. The ụlọ ọrụ ugbu a tumadi na-arụpụta belt ọnwụ igwe, nnukwu ọcha button nkịtị igwe, nkụ igwe, ákwà na-agbasa igwe, ji esi mmiri ọkụ, nrapado igwe, okirikiri mma ọnwụ igwe na ịkwa akwa igwe ngwa, akụkụ na ndị ọzọ na igweoduakwa akụrụngwa, bụ a ngwaahịa mmepe, n'ichepụta, ule na mgbe erechara ahịa n'otu ụlọ ọrụ.
Igwe akwa akwa maka ịme akwa uwe ọkachamara
"Enweghị olileanya maka ahịa, igwe a pere ezigbo mpe"
Na mbido Disemba 2019, ndị ọrụ ọhụụ mepụtara igwe akara akara ikuku ọkụ nke nwere ike ịme uwe mkpuchi ahụike ọkachamara. N'oge ahụ, Mao Xiaoyong na nna ya enweghị ezigbo nchekwube banyere ahịa ya. Mao kwuru na "Ọ bụ naanị otu ụdị mgbe e mepụtara ya, na etinyebeghị ya ma ọlị," Ebumnuche bụ isi mepụtara ngwaahịa a bụ ime ka ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ baa ọgaranya. Anaghị m atụ anya maka ọnụọgụ ahịa ya. E kwuwerị, ọrụ ya dị obere. ”
Ugbu a, ọ bụrụ na oge laghachi azụ na Disemba ahụ, Mao Xiaoyong ji ihu ọchị kwuo na ụlọ ọrụ ahụ dum ga-edozi bọọdụ ihe ndina ahụ wee malite imepụta igwe ịkwa akwa a.
2000 nnukwu iwu site na etiti ụlọ ọrụ
Mana ụlọ ọrụ ahụ enweghị obi ike ịnabata
“Have nwere ikuku ikuku dị ọkụ, ọ bụghị ya?”
“Anyị chọrọ nkeji 2000. Ego ole ka ị nwere? Nwere ike ịkwụ ụgwọ iji ugbu a. Ọ dị ngwa! ”
Na February 10, Mao Xiaoyong nwetara usoro ịkpọ oku site na ụlọ ọrụ etiti. Ọrịa ahụ malitere n'ụzọ niile. Uwe nchebe n'ihu nwere nsogbu mberede. Ndị ọzọ na-aga kpọmkwem n'isi na-emebi nnukwu usoro nke 2000. O juru ya anya na Mao Xiaoyong enweghị obi ike ịza oku na ebe ahụ.
“Na February, enweghị ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, akụkụ ahụ amalitebeghị mmepụta. Ekwula na 2000, anyị nwere nsogbu na 20. ”Mao Xiaoyong mụmụrụ ọnụ ọchị. A na-ebute "anụ mara abụba" n'ọnụ ụzọ dị ka nke a? Mao Xiaoyong adịghị njikere. “Olee otu ụdị ndepụta dị ukwuu a na-apụghị isi megharịa anya? Ajụghị m ya ozugbo. Agbalịrị m ọtụtụ ụzọ, dị ka ịnwa isoro ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọnụ, ma ọ bụ zụta akụkụ ozugbo, ma mee ka ọgbakọ ahụ gbasaa ọsọ ọsọ… “Na Febụwarị nke” ọgba aghara nke agha “, ụlọ ọrụ niile nọ na-arụsi ọrụ ike, na Mao Usoro Xiaoyong dara ada ada. N'ikpeazụ, a ga-ajụ iwu maka nkeji 2000
Akpọwo oku ịkpọ oku
Hot ikuku onuete akara igwe
Ihe ndi mmadu choro karia ka enyere ha
Ekemende, si Shanghai, Hangzhou, Haining, Shandong… All na mba ahịa hotline, niile Nsukka otu nlereanya ukwuu n'otu: na-ekpo ọkụ ikuku onuete akara igwe.
“Ọtụtụ mgbe, a na-akpọ m ihe karịrị ugboro iri abụọ n'ụbọchị.” Mao Xiaoyong gwara ndị nta akụkọ na ọnọdụ ọrịa oria ụlọ ugbu a belata, mana a ka nwere ọtụtụ iwu. Site na ntiwapụ nke ọrịa a na mba ọzọ, ozi ịntanetị sitere Canada, Turkey, Middle East, South America, Asia Pacific na mba ndị ọzọ jupụtakwara na igbe ozi ụlọ ọrụ ahụ. Igwe ikuku mkpuchi ikuku na-ekpo ọkụ dị ụkọ n'ụwa.
(igwe ikuku mkpuchi ikuku na-ekpo ọkụ)
Mgbe ụlọ ọrụ nwere nsogbu, gọọmentị kwesịrị ịgbalịsi ike inyere ha aka
Kedu ihe isi ike ndị dị na mgbochi na ịchịkwa ọrịa na-efe efe? Kedu ihe na-eguzogide ịlaghachi na nchekwa na ọrụ? Jiaojiang na-agbaso "ọrụ atọ" na mgbochi na njikwa ụlọ ọrụ, nsogbu nrụpụta nchekwa, iji dozie nsogbu ahụ.
“N’ọnwa Febụwarị, anyị nyeere ndị mmadụ aka ịlaghachi ọrụ na mmepụta, nyefee ihe mgbochi ọrịa, nyeere ha aka ịhazi usoro mgbochi ọrịa, mee ka ndị mmadụ mara sayensị ma gbuo ihe ọmụma. Na Machị, ebe ha matara na ha enweghị ike ijigide ọsọ nke nrụpụta akụkụ, ha rụrụ ọrụ n'okporo ụzọ iji nyere aka kpọtụrụ ndị nrụpụta ndị ọzọ, ma buru ụzọ zụta akụkụ iji dochie mmepụta nke ha, ka ha wee bulie mbido mbụ. ”Zhang Linghui, onye ọkaibe na-ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ gwara ndị nta akụkọ na agbanyeghị na ọ na-agba mbọ“ ịgba ọsọ ”, usoro ndị a bụ sọsọ na bọket ka emechara, na isi arụpụtaghị ihe nke ụlọ ọrụ a siri ike ịgba ọsọ.
Ruo mgbe ọ hụrụ ozi ọma na mpaghara Zhejiang nyere nnukwu nkwa mmepụta ngwa ahịa maka mgbochi na njikwa ọrịa, Zhang Linghui ghọtara na nke a bụ ohere maka ndị isi. Ya mere, ọ kpọrọ ndị ọrụ Street Hongjia ngwa ngwa ka ha "nyere aka" wee gaa na mmepe mpaghara na Reform Bureau. Ghọta ọnọdụ ngwa ahụ, webata ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu, gbalịsie ike maka oke maka max, ma nyekwa nkwa mmepụta siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ nwere "ọrụ atọ" kachasị ike, n'oge na-ekpo ọkụ.
Onye dị mkpa na-ahụ maka mmepe mpaghara na Bureaulọ Ọrụ Ndozigharị kwuru, sị: “ọ bụ ọrụ anyị ịkwado na ịkwalite mmepe nke ụlọ ọrụ. Mgbe anyị matara ọnọdụ ndị mank, anyị kọọrọ ya ozugbo ma debe oke ahụ. Maka nyocha pụrụ iche na nnabata n'okpuru ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa, ụlọ ọrụ amaghị otu esi akpọsa yana ụdị ngwa ọrụ ha chọrọ. Ya mere, anyị na-eziga "ọrụ atọ" ahụ na ụlọ na njedebe. Iji hụ na ụlọ ọrụ ndị ahọpụtara họpụtara ndị gọọmentị mpaghara na obodo ahụ oge, wee kọọrọ ndị ọchịchị obodo na obodo ahụ ezigbo oge
Mgbe ndị mmadụ chịkọtara nkụ, ire ọkụ na-adị elu
Igwe ikuku mkpuchi ikuku na-ekpo ọkụ nke Max mepụtara
Site na February, mmepụta kwa ọnwa bụ nhazi 5
Na March, kwa ọnwa mmepụta bụ 20 tent
N’ọnwa Eprel, ihe nbinye kwa ọnwa bụ narị itoolu
Site na May, a na-atụ anya ịmepụta otu narị na otu puku n'ọnwa
Egwu di egwu!
Post oge: Ọgọstụ-07-2020